Buy Harrier Smart Watch (M6) သွေးပေါင်းချိန် နှလုံးခုံနှုန်းတိုင်းအားကစား နာရီ Online in Myanmar | Spree.com.mm
Harrier Smart Watch (M6) သွေးပေါင်းချိန် နှလုံးခုံနှုန်းတိုင်းအားကစား နာရီ
Brand : Harrier
Purchase limit: Min purchase per person is restricted to 1 and Max purchase per person is restricted to .
M6 နာရီ လေးက တစ်ခါအားသွင်းရင် ၄ ရက်ခန့် က်ထရီ အားခံပြီး stand by ထားပါက တစ်လ ခန့် အားခံပါတယ်။
Color LCD လေးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး လေးဒေါင့်စကရင် ဖြစ်ကာ နာရီကြိုးအလွယ်တစ်ကူ စိတ်ကြိုက်ဖြင့် အစားထိုးလဲ လှယ်နိုင်သေား နာရီလေး ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နာရီ ရဲ display themes များကို တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးအောင်နေ့စည်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ရေစိုခံ အကြမ်းခံဖြစ်ပြီး touch အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ ကာ နာရီအား အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ မှန်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသဖြင့် တိုက်မိ ခိုက်မိ ပွန်းပဲချင်းမရှိပါဘူး ။
နာရီ ကြည့်ရုံတင်မဟုတ်ပဲ အားကစားတစ်မျိုးချင်းစီအလိုက် အပြေးလေ့ကျင့်ချင်း ( RUN ) စက်ဘီးစီးချင်း ( Ride ) ကြက်တောင်ရိုက်ချင်း ( Banminton ) ကျောက်တောင်တက်ချင်း ( Climb ) စတဲ့ မိမိ ပြုလုပ်မယ့် အားကစားနည်းများကို ရွေးချယ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လတ်တွင် ပတ်ထားပြီး ရေစို ခံ အကြမ်းခံကာ မိမိ အားကစားလုပ်နေချိန်တွင် မိမိ ၏ နှစ်လုံးခုန်နှုန် သွေးပေါင်ချိန်တို ကို အစဉ် မပြတ်ဖော်ပြပေးပြီး မိမိ အားကစားပြီးချိန်တွင်လည်း ဖုန်းလာ မှု့များ ကို တုန်ခါအချက်ပေးချင်း ( call reminder ) မက်ဆေ့ ၀င်ရောက်မှု့များ ကို တုန်ခါ အချက်ပေးချင်း ( Massage reminder ) လမ်းလျောက်/ ပြေး ချိန်းများ တွင် ခြေလှမ်းရေ မှတ်ပေထားချင်း များ ( sport pedometer ) အိပ်စက်ချိန်တွင် အိပ်ချိန် ဘယ်လောက်ရှိလည်း မှတ်သားဖော်ပြပေးချင်းများ ( sleep monitor ) ,သွေးထဲ တွင် အောင်စီချင်းပမာဏ ဘယ်လောက်ဖြစ်နေတယ် ( O2 ) မိမိဖုန်းအထားမှားပြီးပြောက်နေရင် ringtone လေးမြည်ပြီး ပြန်ရှာပေးတဲ့ ( find my phone ) ကိုယ်တနေ့ ဘယ်လောက် ပြေတယ်..တစ်လ ဘယ်လောက် ပြေးခဲတယ်.ကို မှတ်သားပေးထားတဲ့ ( Mileage record ) အားကစားဘယ်နှနာရီ လုပ်လို့ ကယ်လိုရီ ဘယ်လောက် ကျသွားတယ် ကိုမှတ်သားပေးတဲ့ ( calorie record ) နာရီ Date time စတဲ့ သာမန်လူများရေား အားကစား သမားများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ feature နဲ့ function တွေ ပါဝင်တဲ့ smart bracket လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချာချင်တစ်ခေါက်သွင်းထားလျင်း5ရက်ကျော် ခံပြီး အသုံးမပြုလျင် standby လချီး အားခံပါတယ်။ ဖုန်း ဘလူးတု့ ချိတ်ဆက်ကာ ဆော့ဝဲ ဖြင့်နေ့ စည် ကိုယ့်၇ဲ့ လှုပ်ရှားမှု့ Record တွေကို မှတ်သားပေးပြီး အသေးစိတ်ကို လည်း ဆော့ဝဲ မှ တဆင့် ကြည့်ရှို့ နိုင်ပါတယ်။
မိမိ ကောင်မလေးနဲ့အားကစားလုပ်နေချိန်မှာ နှလုံးခုံးနှုန်တိုးလားသလားဆိုတာကိုလည်း ဒီနာရီလေးကလည်း ဖော်ပြပေးတယ်နော် ဒါကြောင့် ချစ်သူနှစ်ဦး တစ်ယောက်တစ်လုံးစီးပတ်ပြီး ဘယ်သူနှလုံး ပိုခုန်လည်း စမ်လို့ ရပါတယ်...
အသက်ကြီးသူများလည်း မိမိ သွေးပေါင်ချိန်ကို အမြဲသိရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ တစ်ယောက်လို့ မိမိ ကျန်းမာရေးကို အမြဲ မပြတ် ဖော်ပြပေးနေလို့ ဘယ်အချိတ်မှာ ဘာလုပ်ရမယ်. ဆိုတာကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ ဘလူးတု့နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး application ဖြင့် လည်း တစ်ခုချင်းစီ အနုစိတ်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ ရေစိုခံ အကြမ်းခံဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်း အားကစားနည်းပေါင်းဆုံ ကစားသမားများ နှင့် လူကြီးလူငယ်မရွေး ချွေးဆို ရေစို ပူပန်စရာမလိုတော့ ပါဘူး.။
HARRIER MOBILE …